पर्दामा फेरी हिट होला जीवन र नीताको जोडी ?
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा फापेको जोडीमा जीवन लुईंटेल र नीता ढुङ्गानाको जोडी पनि पर्न आउँछ । पछिल्लो समय यी दुईले अभिनय गरेको सफल चलचित्र ‘नोटवुक’मा यो जोडी राम्रै जमेको थियो । त्यसो त ‘नोटवुक’को चर्चित गीत ‘गाला रातै’मा यी दुई जोडीको फिचरिङ अहिलेसम्म पनि मिडियामा छाउनेदेखी थुप्रै दर्शकहरुको मनमा तथा मुखमा गुन्जिनेमा पर्छ । अब भने दर्शकले जीवन र नीताको जोडीलाई पुनः पर्दामा देख्न पाउने भएका छन् । चैत्र ६ मा प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘धुन’मा यो जोडीको अनस्क्रिन रोमान्स समेटिएको छ ।
सिनेमाको पर्दामा प्रेम कथालाई फिट जोडीमा पर्छ, जीवन र नीताको जोडी । त्यसैले त होला यी दुई जना फिचरिङ भएको हप्तादिन पहिले सार्वजनिक ‘धुन’ कै एक गीत अहिले मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । त्यसैले पनि पर्दामा पुनः यो जोडीले सफतला चाख्ने धेरैको अनुमान छ । जीवन र नीताको अभिनय तारिफ योग्य रहेको तथा सिनेमा सांगितिक रुपमा पनि शसक्त रहेकोले दर्शकको राम्रो साथ मिल्नेमा ‘धुन’ निर्माता सुशिल शाह आशावादी छन् । त्यसो त उनको सोचाईअनुसार सफलता मिल्नु भनेको जीवन र नीताको जोडी ‘हिट’ हुनु नै हो ।
म्युजिकल लभ स्टोरीमा आधारित यो चलचित्रमा जीवन र नीतासँगै मुकेश ढकाल, श्रेया दुलाल, उमावेवी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । मालती शाहको प्रस्तुतीमा सुशिल शाह, बिनोद भट्ट, मधुसुदन ढकाल र श्रेया दुलालको संयुक्त लगानी रहेको चलचित्र ‘धुन’लाई कृष्ण पौडेलले ‘एक्शन कट’ गरेका छन् । त्यसो त यो सिनेमामा मात्र होईन, ‘धुन’ रिलिज भएको अर्क हप्तालाई प्रदर्शनको मिति तय गरेको सिनेमा ‘भुलभुलैया’मा पनि यो जोडी नै अनस्क्रिन रोमान्समा छ । त्यसैले एकपछी अर्को हप्ता पर्दामा आउँदै गरेको यो जोडी ‘हिट’ अनि ‘फिट’ बनोस् हाम्रो सुभकामना !!